အကောင်းဆုံး အရည်အသွေးစစ်ဆေးသည့်စက် ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ချိသူနှင့် အရည်အသွေးစစ်ဆေးသည့်စက် စက်ရုံကိုဘယ်လိုရွေးရမလဲ။
ကျနော်တို့ပုံမှန် ပူဇော်. အရည်အသွေးစစ်ဆေးသည့်စက် ကအရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရရှိနိုင်ပါတယ်နှင့်ငြိမ်ဝပ်နှင့်ဆေးနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်စံချိန်စံညွှန်းနှင့်ကိုက်ညီအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာအပေါ်အခြေပြုအထွဋ်အထိပ်နှင့်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးရှိတဲ့သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ အသုံးပြု. ထိုထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်ပေးသည်။ ထိုထုတ်ကုန် clients များတတ်နိုင်သောဈေးနှုန်းများမှာကျွန်တော်တို့ကိုကနေရရှိနိုင်တဲ့နိုင်ပါတယ်။
ပုံစံ - HLP-200
PC အခြေခံထိန်းချုပ်မှုစနစ်နှင့်အမြင်အာရုံပုံရိပ်အလိုအလျောက်အသိအမှတ်ပြုမှုစနစ်တို့ကိုပေါင်းစည်းပြီးအစီအရီချိတ်ဆက်ထားသည်,ရည်စူးထားသောအေဂျင်စီမှတဆင့်အရာဝတ္ထု၏အသွင်အပြင်ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်စစ်ဆေးခြင်း,NG ထုတ်ကုန်များကိုထောက်လှမ်းနိုင်သည်,စစ်ဆေးမှုလွဲချော်သောလူအင်အားနှုန်းကိုလျှော့ချပါ,ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးကိုမြှင့်တင်ပါ.
ကြာမြင့်ချိန်:3 ဝန်းကျင်-ငွေချေပြီး ၄ လအကြာ
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.cnclathemachine.com.tw/my/quality-checking-machine.html
အကောင်းဆုံး အရည်အသွေးစစ်ဆေးသည့်စက် ကိုရှာဖွေပြီးစျေးဝယ်ရန်အတွက် Taiwan မှစက်ရုံတစ်ခုမှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားဖြန့်ချိသူ၊ ဖြန့်ချိသူ၊ OEM နှင့် ODM တို့၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်သည်။
ဖိုင်ဘာလေဆာအလိုအလျောက်ဂဟေဆော်စက်ထူးခြားချက်: ယိမ်းနွဲ့နေသောဂဟေခေါင်းသည်မြင့်မားသောကြိုးအားသာချက်ရှိသည်-ရောင်ပြန်ပစ္စည်းဂဟေဆော်,လျှောက်လွှာကျယ်ပြန့်,က’အလွန်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်. ဂဟေဆော်ခေါင်းတွင်မော်တာကိုအသုံးပြုသည်-မောင်းနှင်သော X နှင့် Y ဝင်ရိုးတုန်ခါနေသောမှန်ဘီလူးများ,၎င်းတွင်အမျိုးမျိုးသောလွှဲပုံစံများရှိပြီးပုံမှန်မဟုတ်သောပုံစံများပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်,ပိုကြီးသောဂဟေဆော်သည့်နေရာနှင့်အခြားအပြောင်းအလဲလုပ်ရန်သတ်မှတ်ချက်များသတ်မှတ်ခြင်းသည်ဂဟေအရည်အသွေးကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေနိုင်သည်. ဖုန်မှုန့်များနှင့် splash အကြွင်းအကျန်များညစ်ညမ်းမှုကိုလျှော့ချရန်လေထုကုလားကာအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အတူတပ်ဆင်ထားသည်. အကာအကွယ်မှန်ဘီလူးတွင်အံဆွဲဖွဲ့စည်းပုံရှိပြီးအစားထိုးရန်လွယ်ကူသည်.QBH connector laser အမျိုးမျိုးကိုတပ်ဆင်နိုင်သည်. သတ်မှတ်ချက်: လေဆာစွမ်းအင်:1000W ဖြစ်သည် ကြိမ်နှုန်း:0-၁၀၀၀၀Hz ဖိုင်ဘာ optical အရှည်:၁၀၈၀±5nm အနည်းဆုံးရောင်ခြည်အချင်း:0.၃ မီလီမီတာ ချိန်ညှိနိုင်သောလေဆာကွက်:0.၃ မှ ၅ မီလီမီတာ ဦး ခေါင်းကိုဂဟေဆော်:ND24 Wobble ဂဟေခေါင်း ရေအေးစက်:KELIDA သည် dual temperature dual controller ပါ ၀ င်သည် ပါဝါအဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်:12kw ဖြစ်သည် ပါဝါလိုအပ်သည်:380V ဖြစ်သည်±10%/50Hz ဖြစ်သည် Servo မော်တာ:XYZ ဝင်ရိုးနှင့် Panasonic Rotary ကိရိယာ:မော်တာ reducer နှင့်အတူ 100mm အချင်း rotary device ကို အခြားသတ်မှတ်ချက်များရှိသည်.,ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ. လျှောက်လွှာများ:စဉ်ဆက်မပြတ်ဖိုင်ဘာလေဆာဂဟေစက်အမျိုးမျိုးသောသတ္တု workpiece ဂဟေဆော်ရန်သင့်လျော်သည်,က’s စွယ်စုံ သုံး၍ အချိတ်အဆက်ရှိသောဂဟေဆော်သူများအတွက်သင့်တော်သည်,မိုဘိုင်းဖုန်းဆက်စပ်ပစ္စည်းများ(အလတ်စားပန်းကန်,အခွံမာသီး),ပါဝါဘက်ထရီ,hardware ပိုင်း,မော်တော်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများတည်ဆောက်ပုံအစိတ်အပိုင်းများ,ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများ,တိကျသောအစိတ်အပိုင်းများစသည်တို့.က’ကြေးနီကဲ့သို့သတ္တုပြားအမျိုးမျိုးကိုအဆက်မပြတ်ဂဟေဆော်ရာတွင်အဓိကအားဖြင့် s ကိုသုံးသည်,အလူမီနီယံ,တိုက်တေနီယမ်,အစွန်းခံသံမဏိ,ကာဗွန်နိမ့်သံမဏိ,စသည်တို့. ငါ့မြေး&အိမ်အရောက်ပို့ပေးပါတယ်ကြာမြင့်ချိန်:ခန့်မှန်းချက် 3-ငွေချေပြီး ၄ လအကြာကုန်သွယ်ရေးသက်တမ်း:FOB,ချင်းအမျိုးသားတပ် ဦး,CIF သို့မဟုတ်အခြားသူများတင်ပို့ခြင်း:ပင်လယ်ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးငွေပေးချေမှု:၄၀%တီ/T ငွေပေးချေမှု；60%ပို့ဆောင်မှုမတိုင်မီလက်ကျန်ငွေအထုပ်:စံအထုပ်